Akhr:– Warbixin Cajiiba Oo Laga Diyaariyay 81-Jir Haysata Phd Oo Qashinka Gurta Wadanka Ay U Dhalatay + Sawiro | Saxil News Network
Akhr:– Warbixin Cajiiba Oo Laga Diyaariyay 81-Jir Haysata Phd Oo Qashinka Gurta Wadanka Ay U Dhalatay + Sawiro
Lubnaan (Saxilnews) Haweeney 81-jir ah oo sameysay koox haween kaliya ah oo qashinka ka uruurisa tuulada ay ka deggan tahay dalka Lubnaanayaa haatan waxaa ku soo qulqulaya dad fara badan oo waydiinaya qaabka ay howshan u qabatay.
Sagaal bilood oo ka mid aheyd sanadihii 2015 iyo 2016 ayaa waxaa waddooyinka magaalada caasimadda ah ee Bayruut buuxiyay qashin, ilaa iyo haatanna malahan goobo lagu qubo qashinka taas oo ka dhigtay in qashinka qaar ka mid ah magaalooyinka lagu qubo badda.
“Meelkasta qashin ayaa daadsanaan jiray carruurtuna waa ay ku wasakhoobi jireen,” Saynab Muqallid.
Waxa ay xasuusataa 1980-tamaadkii ilaa 90-meeyadii, markii Israa’iil ay 15 sano haysatay qeybo ka mid ah koonfurta dalka, markaas oo qashin uu xiray tuuladeeda, Carabsaalim.
Sanado badan ayaa la soo maray, qashinkuna wuu sii bataa un, kaddib ayey Muqallid u tagtay barasaabka gobolka si uu gacan uga gaysto arrintan.
Muqallid ayaa isugu yeertay haweenka tuulada si ay gacan u siiyaan, raggiina faraha ayey ka qaadday – sababtoo ah waxa ay doonaysay inay iyaga xoojiso, malaha waxa ay moodaysay inay tahay inay qabtaan shaqo middaas ka wanaagsan.
Khadiija Farxaat ayaa keentay loori si loogu qaado qashinka dib loo habeynayo
Haweenka ayey sidoo kale aheyd inay kala soocaan qashinka dib loo habeynayo iyo midka la tuurayba.
Marka Saynab ayaa u baahneyd dad mutadawiciin ah oo albaab albaab fariinta ugu gaarsiiya haweenka guri-kasta. Shaqada noocaasi ah bulshada Muslimiinta ah ee Lubnaan barmaha 1990-meeyadii waxa ay aheyd mid aan ragga ku haboonayn.
Khadiija Farxaat oo ay saaxiibo yihiin Saynab Muqallid ayaa jeebkeeda ka soo iibisay loori. Muqallid laf ahaanteedana beer ay laheyd ayaa waxa ay ka dhigtay meel lagu kaydiyo qashinka la habeyn karo.
Toban sano kaddib ayaa waxa ay dhaqaale ay ku dhisaan guri weyn ka heleen safaaradda Talyaaniga, halkaas oo haatan ah meesha ay dadku ku booqdaan Muqallid, kuwaas oo ay ka mid yihiin carruur iskuuley ah, arday waa weyn iyo dadka u ololeeya arrimaha bulshada, kuwaas oo halkaa u taga inay soo bartaan sida ay halkaa wax uga socdaan.
qashin ah oo Bayruut ka dilaacay kahor inta aanan bishii Maarso ee 2016 loo wareejin goob qashinka lagu qubo
Dhammaan dadka haysta mad-hadaba kala gadisan ee Islaamka ee Shiicada iyo Suniyiinta, iyo kirishtaankuba waa ay diideen in loo soo dhaweeyo qashinka qubka.
Waxaa la arkay gawaari qaadaysa qashinka kuna qubaysa badda Mediterranean